Isaziso se-Digital Millenium Copyright Act (DMCA) | Ama-CoinGenius Hasters Virtual Crypto Izinkundla
Iwebhusayithi yethu ilandela ukuhlinzeka echwebeni okuphephile kwe-17 USC. § 512, ngenye indlela ibizwa nge- Digital Millenium Copyright Act (DMCA). Ngakho-ke, sizophendula isaziso esibhalwe phansi sokwephulwa kwe-copyright ngokuya nge-DMCA. Uma ukholelwa ukuthi impahla yakho enamalungelo okushicilela ayaphulwa kwiwebhusayithi yethu, sicela uxhumane nathi ngokushesha.
Ukuze sikwazi ukuphendula, kufanele usinikeze isaziso ngefomu elihambisana ngokuphelele nokuhlinzekwa kwezibuko okuphephile kwe-DMCA. Isaziso sakho sokwephulwa kwesimangalo esifunekayo kufanele kube okubhaliwe futhi kufaka ZONKE ezilandelayo:
Isiginesha yomzimba noma ye-elekhtronikhi yomuntu ogunyazwe ukwenza into egameni lomnikazi welungelo elikhethekile okusolwa ukuthi liphuliwe.
Ukukhonjwa komsebenzi one-copyright okuthiwa wephulwe, noma, uma imisebenzi eminingi enamalungelo obunikazi, uhlu lwabamele imisebenzi enjalo.
Ukukhonjwa kwento okuthiwa yokwephula umthetho noma okuyiqiniso lokwephula umthetho futhi okufanele kususwe noma ukufinyelela kulo kuzokhutshazwa, futhi imininingwane inele ngokwanele ukusivumela ukuthi sikuthole lokho okuqukethwe.
Imininingwane inesizathu esizwakalayo ukusivumela ukuthi sikuthinte njengekheli, inombolo yocingo, futhi uma ikhona, ikheli le-imeyili lapho ungaxhumana khona.
Isitatimende sokuthi unokholo oluhle lokuthi ukusetshenziswa kwento ngendlela ekhonondwe ngayo akugunyaziwe.
Isitatimende sokuthi imininingwane ekwisaziso inembile, futhi ngaphansi kwenhlawulo yokuqanjwa kwamacala, ukuthi ungumnikazi we-copyright noma ugunyaziwe ukusebenza egameni lomnikazi we-copyright.
Uma unganikeli inothi ebhaliwe ehlangabezana nalezi zinto, ngeke sihloniphe isicelo sakho futhi asidingeki ngokomthetho ukwenza kanjalo.
Blockchainamahora 15 edlule